Misa Ukusho Ukuthi Ukunakwa Izikhala ziyancipha, Azikho! | Martech Zone
Sikuthanda okuqukethwe okungadliwa okulula kakhulu njengomuntu olandelayo, kepha ngikholwa ukuthi kunombono oyiphutha omkhulu embonini yethu. Umbono wokuthi Izikhathi zokunaka ziyancipha idinga umongo othile wokuzungeza. Okokuqala, angivumelani neze nokuthi abantu basebenzisa amandla amancane ukuzifundisa ngokuzungeza isinqumo sabo esilandelayo sokuthenga.
Abathengi namabhizinisi asebenzise isikhathi esiningi ngaphambi kokwenza ucwaningo asenza ucwaningo oluningi manje. Ngagijima analytics imibiko kuwo wonke amaklayenti ethu Ukulungiselela lokhu okuthunyelwe futhi wonke umuntu onesikhathi esichithwe ekhasini nesikhathi esithe xaxa esichithwe ngeseshini ngayinye uma kuqhathaniswa ne-1 noma i-2 edlule. Senza ucwaningo olunzulu ngokuqukethwe futhi sibona inzuzo engcono kakhulu ekutshalweni lapho siya ngokujulile.
Okuguqukile akuyona isikhathi sokunaka, ngumzamo obandakanyekile ekutholeni okuqukethwe. Abacwaningi manje sebenekhono ekuboneni ngokushesha abakufunayo. Uma bengayiboni, bayahamba. Kepha uma bekuthola, basebenzisa isikhathi esiningi ngokufunda, bacwaninge futhi babelane ngaso.
Uma inkampani yakho ibona ukwehla okukhulu okusetshenziswe ngesikhathi ekhasini noma kusayithi, kungaba ngezizathu eziningi:
Izihloko zakho azifani nokuqukethwe kwakho. Mhlawumbe usebenzisa izindlela ze-linkbait ukuheha abantu bese okuqukethwe kungacebile - lokho kuzokwenza noma ngubani ashiye!
Ubulungiselela okuqukethwe okungalungile. Ukuba nesayithi lakho litholakale ngenhlanganisela yamagama asemqoka ongenawo igunya kuwo kungakhuphula amazinga akho okuncipha futhi kunciphise isikhathi osichitha kusayithi lakho. Bhala kulitshe - njalo!
Ubulokhu uphromotha ngemikhankaso yokusesha ekhokhelwe engenziwanga kahle. Zonke izivakashi ezintsha kusayithi lakho kungenzeka zisebenzise isikhathi esincane kunabantu ababuyayo. Ukuvula imikhankaso kunganciphisa isikhathi esizeni kusayithi njengoba izivakashi ezintsha zikuthola (noma zingakutholi) abakudingayo.
Awutshali imali kumasu wokuqukethwe aqhuba ukubandakanyeka okujulile - njenge-infographics, izethulo, ama-ebook, amaphepha amhlophe, izifundo zamacala, ubufakazi, amavidiyo achazayo, amathuluzi asebenzisanayo, njll.
Okuqukethwe okulula ukudla akuyona isu lokuphaka ngoba ukunweba isikhathi kuyancipha (akunjalo!). Okuqukethwe okulula ukudla izinkwa eziholela abantu kusayithi lakho ngezihloko ezifanele ukuze bathole ukuzibandakanya okujulile kulwazi abalufunayo.
Ngingakuphonsa inselelo ukwenza ukuhlaziywa kokuguqulwa nesikhathi ekhasini noma kusayithi futhi uzothola ukuthi okuqukethwe okuguqukayo kusengukuqukethwe okuyifomu ende. Ucwaningo oluyisisekelo, amaphepha amhlophe, izifundo zamacala kanye nokuningiliziwe, okuthunyelwe okucebile ngolwazi kwama-blog kuyaqhubeka nokushayela ithoni lokubandakanya futhi kuholele ekuguqulweni.
Ukuthuthukisa i- isu lokukhangisa lokuqukethwe kufanele kubandakanye ukwakhiwa kokuqukethwe kwamazinga ahlukene okubandakanya ukuze, njengoba umthengi noma ibhizinisi liba nentshisekelo enkulu, bakwazi ukungena ngokujulile ocwaningweni abaludingayo.
Okuqukethwe okulula ukudla kunendawo yako, kepha akukhona okokunaka okufishane. Kungenxa yomzamo omncane nezethameli ezibanzi ukudonsela izivakashi ekujuleni! Kuthambisa amanzi ngenkathi isicupho sangempela silinde ngaphambi kwenhloso yakho.
Unalokho engqondweni, le infographic evela ku-Oracle inokuqonda okuhle ngamasu wokuqukethwe angadliwa.
Tags: infographicOracleokuqukethwe okulula ukudlaisikhathiisikhathi ekhasiniisikhathi esizeniisikhathi esichithwe kuseshiniisikhathi esichithwe ekhasiniisikhathi esichithwe kusayithi
Dec 24, 2014 ku-8: 59 AM
Ngikhululekile ukuzwa ukuthi izivakashi zewebhu zichitha isikhathi esiningi zifunda amakhasi amaklayenti akho kunakuqala 1 - 2 eminyakeni edlule. Ezweni lanamuhla lokulunywa umsindo, lokho kusho kahle kithina esikholelwa ekutshaleni isikhathi sokwenza okuqukethwe okucabangayo, okucwaningwe kahle!
Dec 29, 2014 ku-9: 56 AM
Lokhu kuhle kakhulu! Ngijabule kakhulu ukuthi ukubaluleka kokuqukethwe okunothe ngolwazi, okuyifomu ende akuphelanga.
Ngiyayithanda lapho othile enza isimangalo esiyingqayizivele nesibindi esiphonsela inselelo imibono eyaziwayo